Mandeha amin'ny zaridaina mananika miaraka amin'ny ankizy - manao fanatanjahan-tena voajanahary
Miaraka amin'ireo ankizy ao amin'ny zaridainam-piakarana
Fepetra takiana amin'ny fiakarana
Ny fiakarana, ny mampifandanjana ary ny mitsambikina dia ao anatin'ny filan'ny voajanahary ny zaza. Mianatra ny filaharan'ny hetsika ny zaza ary mampiofana ny fahaizany mandrindra. Ny fiakarana ala dia toerana fitsangatsanganana mety indrindra ho an'ny fianakaviana iray manontolo, mba hahafahan'ny ankizy mamela ny etona sy ny fiaran-dalamby ary ny fiaretana.
Fiantsonana fiakarana ho an'ny ankizy
Amin'ny fiakarana ala, ny lalan'ny fiakarana artifisialy dia noforonina tamin'ny hazo. Ny làlan'ny tsirairay (parcours) dia mifandray amin'ny singa miakatra isan-karazany ary manana fahasamihafana isan-karazany.
Zaridaina mananika sy zaridaina tady avo - © Kadmy / Adobe Stock
Misy fampianarana tady avo lenta ho an'ireo mpanao ski ambony. Zava-dehibe ny miverina eto, raha tsy izany dia mety hampidi-doza. Ny ala miakatra sy ny tady avo lenta rehetra dia iharan'ny lalàna arahin'antoka ka azo antoka ny fiarovana ny tanora sy ny lehibe.
Mazava ho azy fa ilaina ihany koa ireo manampahaizana voaofana ary eo an-tanana hanomezana torohevitra sy fanampiana an'ireo mpihanika.
Fiakarana sy fifandanjana
Ny ankizy dia afaka manatanjaka ny herim-pony amin'ny tetezana mihetsiketsika na manjavozavo amin'ny alàlan'ny ala mikitroka. Ny fandanjana ny vatan-kazo, ny fandresena ny zigzag ary ny fikororohana ary ny tohatra fiakarana dia manome antoka fa hihatsara ny fahaizan'ny môtô zaza.
Ny fiakarana amin'ny rindrin'ny fiakarana na ny fiampitana ny fanamboarana tady toy ny harato dia tsy vitan'ny mahafinaritra, fa mampiroborobo ny fahatokisan-tenan'ireo mpihanika kely koa.
Indrindra ireo ankizy lehibe amin'ny tanàn-dehibe dia tsy zatra ny filaharan'ny fivezivezena intsony ary afaka mianatra sy mampiofana azy ireo eto. Ny fifantohana sy ny saina dia ampiofanana amin'ny fotoana iray amin'ny fomba filalaovana.
Ny ankamaroan'ny ala mananika dia manana taona farafahakeliny 5 na 6 taona, haavo ambany indrindra 1,10 metatra ary lanja 130 kilao ambony indrindra, izay mihatra amin'ny olon-dehibe ihany koa. Amin'ny ankabeazan'ny ala fiakarana, ny zaza latsaky ny 14 taona dia avela hiakatra ihany rehefa miaraka amin'ny olon-dehibe.
Ny akanjo maivana sy milamina nefa mety tsara ary kiraro matanjaka dia anisan'ny fitaovana fototra. Tokony hiantso alohan'ny hitsidihana ny valan-javaboary iray ianao, satria ireny zaridaina ireny dia misy mpanatrika tsara amin'ny faran'ny herinandro sy mandritra ny fialantsasatra ary mety misy fotoana fiandrasana tena lava, izay manambaka ny ankizy amin'ny fahafinaretana. Ankoatr'izay, ny valan-javaboary dia mihidy amin'ny andro orana noho ny antony azo antoka.